RLBox, teknụzụ mwepu ọhụrụ nke ọbá akwụkwọ Mozilla ga-eji Site na Linux
Ọchịchịrị | | Emelitere na 26/02/2020 17:12 | Noticias
Ndị nyocha Mahadum Stanford, na Mahadum California na san diego y la Mahadum Texas ke Austin Ha emepeela otu ngwaọrụ nke ha nyere aha ya "RLBox", que enwere ike iji ya dị ka ọkwa mkpuchi ọzọ igbochi adịghị ike na ọba akwụkwọ ọrụ.
RLBox bu n’obi idozi nsogbu nchekwa nke ọba akwụkwọ ndị ọzọ Enweghị ntụkwasị obi nke ndị mmepe na-anaghị achịkwa, mana nsogbu nke isi ọrụ nwere ike imebi.
Mozilla na-ezube iji RLBox na Firefox 74 na-ewuli maka Linux na na chịkọtara MacOS na Firefox 75 iji wezuga igbu nke ọbá akwụkwọ Graphite, nke na-aza ajụjụ maka isi mmalite.
N'otu oge ahụ, RLBox akọwapụtaghị Firefox ma enwere ike iji ya wepụta ọbá akwụkwọ ọ bụla na ọrụ aka ike.
Usoro ọrụ RLBox gbadara iji chịkọta koodu C / C ++ site na ọbá akwụkwọ dịpụrụ adịpụ gaa koodu WebAssembly nke etiti obere-ọkwa, nke a na-ewepụta dị ka modulu WebAssembly, nke ikike ya ka etinyere naanị na modulu a (dịka ọmụmaatụ, ọbá akwụkwọ maka nhazi eriri enweghị ike imeghe oghere ma ọ bụ faịlụ ntanetị) Ntugharị koodu C / C ++ a WebAss Assembly na-eji wasi-sdk.
Maka igbu egbu, a na-agbakọta modul WebAssembly n'ime koodu igwe na-eji nchịkọta Lucet ọ na-agbakwa na "nanoprocess" iche na ndị ọzọ nke ebe nchekwa. Ihe nchikota Lucet dabere na otu koodu dika igwe Cranelift JIT ejiri ya na Firefox iji mee WebAssembly.
Ngwakọta a gbakọtara na-arụ ọrụ na ebe nchekwa dị iche ma ọ nweghị ohere ịnweta ebe adreesị ndị ọzọ. N'ihe banyere irigbu ihe na-adịghị ike n'ọbá akwụkwọ, onye na-awakpo ahụ ga-ejedebe ma ghara inwe ike ịnweta ebe nchekwa nke usoro isi ma ọ bụ nyefee njikwa na mpụga sandbox.
E nyere API dị elu maka ndị mmepe, na-enye gị ohere ịkpọ ọrụ ọrụ ọbá akwụkwọ na ọnọdụ iche.
na Ndị na-ahụ maka webụsaịtị na-achọ ka ọ nweghị mgbakwunye ọzọ na iso ha na-emekọrịta emeghị nwayọ karịa ịkpọ ọrụ nkịtị (ọrụ ọbá akwụkwọ na-agba n'ụdị koodu obodo, na ibubiga ibu na-eme naanị mgbe a na-eyingomi ma nyochaa data na usoro nke iji sandbox emekọrịta) .
Enweghị ike ịkpọku ọrụ nke ọbá akwụkwọ dịpụrụ adịpụ ozugbo, yana iji nweta ha, ị ga-eji akwa ahụ invoc_sandbox_function ().
N'aka nke ya, ọ bụrụ na ha chọrọ ịkpọ ọrụ mpụga site n'ọbá akwụkwọ, a ga-akọwapụta ọrụ ndị a n'ụzọ doro anya site na iji Register_callback usoro (na ndabara, RLBox na-enye ohere ịnweta ọrụ ọbá akwụkwọ ọkọlọtọ).
Iji hụ na nchekwa nchekwa ọrụ, ịhapụ koodu igbu ezughị nakwa ịkwesịrị ịnye nkwenye nke iyi data eweghachitere.
Ueskpụrụ ndị e mepụtara na gburugburu dịpụrụ adịpụ bụ akara dị ka ndị a na-apụghị ịdabere na ya, na-ejedebe site na mkpado emetọ, ma chọọ nkwenye ma detuo na ebe nchekwa ngwa maka "mkpocha."
Na-enweghị nhicha, ịnwale iji data emetọ emetọ n'ọnọdụ nke chọrọ data oge niile (yana nke ọzọ) na-eduga n'ọgbọ nke njehie na nchịkọta mkpokọta.
Obere arụmụka ọrụ, ụkpụrụ nloghachi, na akụkụ gafere site na i copomi n'etiti usoro nchekwa na ebe nchekwa sandbox. Maka usoro data buru ibu, a na-ekenye ebe nchekwa na gburugburu ebe dịpụrụ adịpụ ma weghachite ntuziaka "sandbox" kpọmkwem na isi usoro.
A na-ekesa mmepe RLBox n'okpuru ikikere MIT. RLBox na-akwado Linux na macOS ugbu a na-atụ anya na-dakọtara na Windows mgbe e mesịrị.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmatakwu banyere teknụzụ ọhụrụ a nke Mozilla na-ezube itinye na Firefox, ị nwere ike ịtụle mmepe ya yana nwalee API Na njikọ na-esonụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Noticias » RLBox, teknụzụ nkewapụrụ ọhụụ ọhụụ nke Mozilla ji
Freespire 6.0 Abịa na Linux Kernel 5.3.0-28, Nwunye 1.20 na More